Ruushka, China, K.Kuuriya & Japan oo qarka u fuulay inuu dagaal hawada ku dhexmaro |
Ruushka, China, K.Kuuriya & Japan oo qarka u fuulay inuu dagaal hawada ku dhexmaro
Ruushk (NogobNews) 24/07/2019
Dowlada Ruushka ayaa maanta oo Arbaca ah raali gelin ka bixisay in diyaaradahooda dagaalka ay ku xad-gudbeen hawada wadanka Kuuriyada Koonfureed, sida lagu sheegay warsaxaafadeed kasoo baxay xafiiska Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed.
Salaasadii shalay ayey labo diyaaradooda oo ah kuwa wax duqeeya ee A50 oo laga leeyahay Ruushka ay gudaha usoo galeen hawada dalka Kuuriyada Koonfureed, diyaaradaha dagaalka ee Kuuriyada oo ka hortagay kuwa Ruushka ayaa la sheegay inay ku rideen 300 xabo oo rasaas digniin ah.
Wasaarada Gaashaandhiga ee Ruushka ayaa cambaareysay Diyaaradaha dagaalka ee wadanka Kuuriyada Koonfureed ee rasaasta ku riday diyaaradahooda, falkaasi oo ay ku tilmaameen mid “…edeb-daro…” ah.
Ruushka ayaa ku dooday in cilad ku timid qeybta hagida diyaaradahooda ay keentay inay si khaldan u galaan hawada dalkaasi.
Dhinaca kale dalka Japan oo isaguna kula muran san wadanka Kuuriyada Koonfureed hawada ay isku heystaan ayaa heegan geliyey ciidamadooda cirka, waxayna digniin u direen Ruushka iyo Kuuriya Koonfureed oo ay sheegeen inay labaduba kusoo xad gudbeen hawada wadanka Japan.
Diyaaradaha Ruushka ayaa la sheegay inay ku jireen roondo dhanka hawada ah oo ay si wadajir ah ulla sameeyaan diyaaradaha dagaalka ee wadanka Shiinaha oo ay xulafo yihiin, waxayna dhacdadan qarka u saartay in isku dhac uu ka dhex qarxo 4taas wadan ee jaarka ah.